Sarkaal Sare Oo Lagu Dilay Magaalada Qandahaar. – Bogga Calamada.com
Sarkaal Sare Oo Lagu Dilay Magaalada Qandahaar.
Wararka ka imaanaya magaalada Qandahaar ee Konfurta dalka Afghanistan ayaa sheegaya in gudaha magaaladaasi qarax xoogan lagula beegsaday sarkaal sare oo ka tirsan maamulka Ridada Kaabul iyo ilaaladiisa.
Qaraxan waxa uu sigaar ah kaga dhacay xaafada Afaraad ee magaalada Qandahaar, iyadoona qarax uu ahaa mid gaarigiisa loogu xiray sarkaal lagu magacaabi jiray Jaanan Mama kaasi oo ahaa taliyaha qaybta Fal Cilinta deg dega ee ciidamada ilaaliya xududbeenaadka dalkaasi.
Sarkaalkan la khaarijiyay ayaa waxaa sidoo kale lala dilay Lix askari oo isaga ilaala u aheed sidoo kale waxaa burburay gaarigii ay la socdeen.
Sheekh Dabiixullaahi Mujaahid Afhayeenka Imaarada Islaamiga Afghanistan oo war kooban soo saaray ayaa sheegay in sarkaalkan lagu dilay magaalada Qandahaar uu ahaa sarkaal ay si gaar ah u baadi gabayeen ciidamada Mujaahdiinta Dhaalibaan ugu dambeyntiina Allaah fadhligiisa Mujaahidiinta ay ku guuleysteen in ay ka takhalusaan, waxa uu sheekh Dabiixullaahi intaasi ku daray in sarkaalkan uu ahaa mid dilal iyo dhibaatooyin kalaba u geystay shacabka Muslimiinta Afghanistan.
Qaraxa lagu dilay sarkaalkan iyo lixda askari ee ilaaladiisa ahaa ayaa kusoo aadaya xilli 48-dii saac ee lasoo dhaafay inka badan 60 isugu jirta askar iyo saraakiil ka tirsan Murtadiinta Afghanistan dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen weeraro ciidamada Mujaahidiinta Imaarada Islaamiga Afghanistan ay ka fuliyeen toban Wilaayo oo ka tirsan gobalada dalkaasi.